YouTube वाच समयहरू खरीद गर्नका के फाइदाहरू छन्?
तपाइँ तपाइँको च्यानल मुद्रीकरण गर्न 4,000 घण्टा पुग्न मद्दत गर्दछ
YouTube र गुगल खोज र्या Google्किking बढाउन घण्टा हेर्नुहोस्
सेवा स्टार्ट २ 24-72२ घण्टा र पूरा नभएसम्म दैनिक जारी रहन्छ
छिटो र ग्यारेन्टी डेलिभरी
उत्तम कार्य गर्दछ यदि तपाइँ एक १ a+ मिनेट भिडियो बुझाउनुहोस्
YouTube हेर्ने घण्टा बढाउने द्रुत तरिकाहरू
स्ट्याटिस्टा रिपोर्टका अनुसार युट्युबमा हरेक मिनेट ५०० घन्टाभन्दा बढी भिडियोहरू अपलोड हुन्छन्। यति धेरै सामग्रीको साथ, सान्दर्भिक खोज परिणामहरू सिफारिस गर्ने प्रक्रिया कठिन हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म, YouTube ले खोज परिणामहरू र सिफारिस गरिएका भिडियोहरू मिलाउन भिडियोहरूमा हेरिएको संख्यामा भर पर्थ्यो। YouTube को न्याय मापदण्ड परिवर्तन भएको छ र, हाल, YouTube ले खोज परिणामहरू क्रमबद्ध गर्न धेरै मेट्रिक्स खातामा लिन्छ।
मेट्रिक 'हेर्ने समय' लाई YouTube मा रैंकिंग निर्धारण गर्नको लागि नम्बर एक कारक मानिन्छ। YouTube ले मानिसहरूले भिडियोहरू हेरेर बिताएको समय र उनीहरूले तपाईंका भिडियोहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छन् वा गर्दैनन् भनी हेर्छ। यो हेराइको बारेमा मात्र होइन, यो तपाइँको भिडियोहरूमा मानिसहरू कति लामो समय सम्म रहन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईंको हेराइहरू बढाउन सजिलो भए तापनि अर्गानिक रूपमा तपाईंको हेराइको समय बढाउन गाह्रो हुन सक्छ। YTpals ले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। तिमी सक्छौ YouTube हेर्ने घण्टा किन्नुहोस् YTpals बाट तपाईंको भिडियोहरूको YouTube र Google खोज श्रेणीहरू बढाउन।
समय हेर्नको लागि एक व्यापक गाइड
हेर्ने समय एक मेट्रिक हो जसले तपाइँको सामग्रीले दर्शकहरूलाई कति समय सम्म व्यस्त राख्छ भनेर निर्धारण गर्दछ। आफ्नो हेर्ने समय बढाउनको लागि तपाईंले आफ्ना भिडियोहरूलाई दर्शकहरूका लागि थप खोजयोग्य बनाउन आवश्यक छ। हामीले हेर्ने समय बढाउने तरिकाहरूमा पुग्नु अघि, YouTube को श्रेणीकरण एल्गोरिथ्मको इतिहासलाई संक्षिप्त हेरौं।
2012 सम्म, भिडियोको सफलताको लागि प्राथमिक मापन हेराइ गणना मानिन्थ्यो। भिडियोहरूको श्रेणी निर्धारण भ्यूको सङ्ख्याद्वारा निर्धारण गरिएको थियो। यसले भिडियो शीर्षकहरू र थम्बनेलहरूका साथ क्लिक ब्याट्स प्रयोग गर्ने बढ्दो प्रयोगको नेतृत्व गर्दछ जुन प्रायः क्लिकहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धित थियो। यद्यपि यी क्लिक प्रलोभन भिडियोहरूले धेरै संख्यामा हेराइहरू प्राप्त गर्नेछन्, तर दर्शक अवधारण दर धेरै कम हुनेछ। उच्च उछाल दरले संकेत गर्दछ कि प्रयोगकर्ताहरू सुझावसँग सन्तुष्ट थिएनन्। नतिजाको रूपमा, यो बुझियो कि हेराइ गणना भिडियोको गुणस्तर वा सान्दर्भिकताको उत्कृष्ट संकेत होइन।
YouTube ले थाहा पायो कि भिडियोको लागि राम्रो उपाय भनेको प्रयोगकर्ताले भिडियोमा खर्च गरेको समय हो। जब दर्शकले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्छ, यसले उच्च स्तरको सन्तुष्टिलाई जनाउँछ। YouTube को अधिकांश राजस्व विज्ञापनहरूबाट बनाइएको हुनाले, यसले दर्शकहरूलाई सकेसम्म लामो समयसम्म भिडियोहरू हेर्न चाहन्छ। विज्ञापनदाताहरूले YouTube लाई यसको गुणस्तर सूची र यो दर्शकहरूको लागि दैनिक भिडियो हेर्ने गन्तव्य हो भन्ने तथ्यलाई चिन्छन्।
यो अक्टोबर 2012 मा नयाँ YouTube एल्गोरिथ्म सुरु भएको थियो। 'हेर्ने समय' मा आधारित यो नयाँ एल्गोरिदमले दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्ने भिडियोहरूलाई ध्यानमा राखेको छ। YouTube ले भिडियोहरूको श्रेणी समायोजन गर्न थाल्यो र आकर्षक साबित भएकाहरूलाई पुरस्कृत गर्‍यो र दर्शकहरूलाई सबैभन्दा लामो समयसम्म YouTube मा राख्यो। नयाँ एल्गोरिथ्मको साथ, दृश्य गणना अब श्रेणी सामग्रीको लागि निर्धारक मानिने थिएन।
हेर्ने समय के हो?
हेर्ने समय YouTube ले SEO को उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने धेरै मेट्रिकहरू मध्ये एक हो। YouTube ले हेर्ने समयलाई तपाइँका दर्शकहरूले भिडियो हेरेर बिताएको कुल समयको रूपमा वर्णन गर्दछ। YouTube क्रिएटर प्लेबुकले यो पनि बताउँछ कि साइटमा हेर्ने समय बढाउने भिडियोहरू खोज परिणामहरू र सुझाव गरिएका भिडियोहरूमा उच्च रूपमा देखा पर्न अनुकूलित हुन्छन्। दर्शकहरूको नजरमा तपाईंको च्यानल र भिडियोहरूको मूल्य बढाउन प्रयोग गर्न सकिने कुनै एकल रणनीति छैन। यसको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ। तपाईं YTpals बाट YouTube हेराइ घण्टा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसमा पुग्नु अघि, YouTube हेराइ समयको बारेमा केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले आफैलाई परिचित गर्नुपर्छ।
पहिलो, दर्शक प्रतिधारण दर र हेरिएको अनुमानित मिनेट दुई नजिक सम्बन्धित कारकहरू हुन्। दर्शकहरूले तपाईंको सामग्रीमा खर्च गरेको समय मिनेट वा सेकेन्डमा मापन गरिन्छ। दर्शक प्रतिधारण दरले दर्शकले तपाईंको सामग्रीमा खर्च गरेको औसत समयलाई जनाउँछ। उच्च अवधारण दरले प्रयोगकर्ताको ध्यान खिच्ने भिडियोको क्षमताको सङ्केत गर्छ। YouTube ले तपाइँको भिडियोले साइटमा प्रयोगकर्ताको हेराइ समयमा योगदान गर्ने तरिकालाई अवलोकन गर्दछ।
दोस्रो, युट्युबले प्रति प्रयोगकर्ता सत्र हेराइ समयलाई मन पराउँछ। हेर्ने समय तपाईंको भिडियो हेरिएको मात्रामा मात्र होइन तर YouTube मा एक विशेष प्रयोगकर्ताको हेराइ समयमा तपाईंको भिडियोको योगदानसँग सम्बन्धित छ। दर्शक-विशिष्ट सत्र समय YouTube को लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तिनीहरूको मुख्य लक्ष्य दर्शकहरूलाई सन्तुष्ट र लामो समयसम्म साइटमा संलग्न राख्नु हो।
यदि तपाईंले 30-सेकेन्डको भिडियोलाई 20-मिनेटमा विस्तार गर्नुभयो भने तपाईंले हेर्ने समयबाट पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने छैन। कुञ्जी भनेको आकर्षक भिडियोहरू बनाउनु हो जसले दर्शकहरूलाई लामो समयसम्म टाँसिरहन्छ। YouTube ले साइटमा प्रयोगकर्ताहरूको हेराइ समय बढाउने सामग्री हेरिरहेको छ।
YouTube हेराइ समय बुझ्नको लागि उदाहरण
प्रयोगकर्ताले YouTube मा विशेष रूपमा केहि खोज्छ र तपाइँको भिडियो पहिले हेर्छ। त्यसपछि, प्रयोगकर्ताले सम्बन्धित भिडियोहरूको श्रृंखला हेर्छन्। यस अवस्थामा, हेर्ने समयले भिडियोहरूको त्यो शृङ्खलामा बिताएको सत्र हेर्ने समय समावेश गर्दछ। यदि दर्शकहरूले भिडियो छोडेर अर्को खोज गर्न अघि बढे भने हेराइको समय नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुनेछ। यदि तपाईंको भिडियो सामग्रीद्वारा नयाँ YouTube अवलोकन सत्र सिर्जना गरियो भने हेराइको समय सकारात्मक रूपमा प्रभावित हुनेछ। उदाहरणका लागि, एक स्थापित YouTuber को प्रभावले हेर्ने सत्रहरू ड्राइभ गर्नेछ जब प्रयोगकर्ताहरू अन्य सम्बन्धित YouTuber भिडियोहरू हेर्नको लागि अगाडि बढ्छन्।
YouTube हेर्ने समयको महत्त्व
अब जब हामीलाई हेराइ समयको बारेमा थाहा छ, आउनुहोस् हामी सामग्री निर्माताको लागि हेराइ समयको महत्त्वलाई हेरौं -
उच्च-गुणवत्ता सामग्री: जब दर्शकहरू तपाइँका भिडियोहरूमा अन्त्य सम्म रहन्छन्, यो तथ्यलाई संकेत गर्दछ कि तपाइँको YouTube सामग्री उच्च गुणस्तरको छ। YouTube ले अन्ततः तपाइँका भिडियोहरूलाई मन पराउनेछ र तिनीहरूलाई सुझाव गरिएका भिडियोहरूको रूपमा प्रचार गरेर तिनीहरूको रैंकिंग बढाउनेछ।
मुद्रीकरण: AdSense मार्फत साझेदारी गरेर YouTube मा पैसा कमाउनको लागि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको हेराइ समय मेट्रिक्स प्रभावशाली छ। नयाँ YouTube नीति अनुसार, यदि तपाइँ मुद्रीकरण लाभहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको सामग्री YouTube मा प्रति वर्ष कम्तिमा 4,000 संचयी घन्टा हुन आवश्यक छ।
प्रयोगकर्ता सन्तुष्टि: यदि तपाईंको युट्युब च्यानलमा हेर्ने समय बढिरहेको छ भने यसको मतलब तपाईंका दर्शकहरू तपाईंको सामग्रीसँग खुसी छन्। यो तथ्यको सूचक हो कि तपाईं संलग्न दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाईंको च्यानल हेरिएको घण्टा कसरी पत्ता लगाउने
तपाईंले आफ्नो हेराइ समय बढाउने तरिकाहरू पत्ता लगाउनु अघि, तपाईंको च्यानलको तथ्याङ्कहरू हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि, तपाईंले YouTube मा सिर्जनाकर्ता स्टुडियो खोल्न र बायाँ-हात मेनुबाट विश्लेषण ट्याब खोल्न आवश्यक छ। विश्लेषण पृष्ठमा, चार्टको फेदमा रहेको "अन्तिम ३६५ दिनको दृश्य विकल्प छनोट गर्नुहोस्। तपाईंले मानिसहरूले तपाईंको सामग्री हेरेर बिताएका कुल मिनेटहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाइँको तथ्याङ्कले 365 वा 240,000 घण्टा देखाउँछ भने, तपाइँ सफलतापूर्वक मुद्रीकरणको लागि थ्रेसहोल्ड पार गर्नुभयो र तपाइँ सही ट्रयाकमा हुनुहुन्छ।
श्रोता अवधारण बुझ्न एनालिटिक्स प्रयोग गर्दै
तपाइँको दर्शक समय संग लगातार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर भिडियोमा केहि बिन्दुहरू छन् जहाँ तपाइँको दर्शक अवधारणले तीव्र तल तर्फ मोड लिन सक्छ। तपाइँको च्यानल मा दर्शक प्रतिधारण मा गिरावट को कारण बुझ्न को लागी दर्शक रिटेन्सन मेट्रिक को विश्लेषण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले अवलोकन खण्डको तलको विश्लेषण ट्याबमा दर्शक प्रतिधारणको बारेमा थप जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले दर्शक प्रतिधारण दरमा चुचुरा र उपत्यकाहरू फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ, जसलाई भिडियोमा निर्दिष्ट बिन्दुहरूसँग सम्बन्धित गर्न सकिन्छ। तपाइँ तपाइँको भिडियो को पहिलो 15 मिनेट भित्र तपाइँको दर्शकहरु को ध्यान हुक गर्न को लागी केहि तरिकाहरु छन्।
तिनीहरूमध्ये केहीलाई हेरौं।
बिन्दुमा छिटो पुग्नुहोस्: यदि तपाइँको भिडियोले केहि जटिल विषय बताउँछ वा केहि ट्यूटोरियल दिन्छ भने, दर्शकहरू तुरुन्तै सामग्रीमा पुग्न चाहन्छन्। यदि तपाइँ मुख्य सामग्रीमा छिटो पुग्नुहुन्न भने तपाइँ दर्शकहरूलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
परिचय संगीत हटाउनुहोस्: यदि तपाईंको भिडियोको परिचय विशेष रूपमा लामो छ भने, दर्शकहरूले तपाईंको च्यानल छोड्न सक्छन्। यसका अतिरिक्त, केही सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले दर्शकहरूलाई "बेल आइकन थिच्न" अनुरोध गर्न राम्रो समय खर्च गर्छन्। परिचय छोटो राख्न र तपाईंको भिडियोले कुरा गर्ने कुराहरूको सानो पूर्वावलोकन दिन सल्लाह दिइन्छ।
क्लिक बाट्स प्रयोग नगर्नुहोस्: दर्शकहरूलाई बहकाउने सही भिडियो शीर्षक र थम्बनेलहरू प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ क्लिकबाइट सामग्री बनाउनुहुन्छ भने, दर्शकहरू रिसाउनेछन् र तपाइँको च्यानलमा फेरि फर्कने छैनन्। तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु को जिज्ञासा जगाउन को लागी अर्को तरीका भिडियो कथा को क्लाइमेक्स को एक टिजर देखाउनु हो।
तपाईंको YouTube च्यानलको लागि हेर्ने समय कसरी बढाउने
यदि दर्शकहरूले तपाईंको भिडियोहरूमा महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरिरहेका छन् भने, त्यसपछि YouTube एल्गोरिदमले तपाईंको च्यानल र भिडियोहरूलाई खोज सिफारिसहरूमा हाइलाइट गर्नेछ। युट्युबले विगतमा पनि युट्युबमा दर्शकको सेसन टाइम बढाउने भिडियोहरूमा ध्यान दिने बताएको छ । यसले तपाईको भिडियो हेरेपछि व्यक्तिले हेरेको अर्को भिडियोलाई मात्र होइन, तर त्यसपछिको लगातार भिडियोहरू हेरेको समयलाई पनि ध्यानमा राख्छ। तपाईंको च्यानलको हेराइ समय बढाउनको लागि कुनै एकल रणनीति प्रयोग गर्न सकिँदैन। एउटा तरिका भनेको YouTube हेर्ने घण्टा खरिद गर्नु हो। तपाईंले आफ्नो च्यानलको हेराइ समय र दर्शकहरूको सत्र हेर्ने समय बढाउनको लागि हेराइ घण्टा खरिद गर्न संयोजनमा निम्न सुझावहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
1. आफ्नो भिडियोको परिचयलाई शक्तिशाली र आकर्षक बनाउनुहोस्
श्रोतालाई सुरुदेखि नै जोड्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो प्रायः भनिन्छ कि भिडियोको पहिलो 15 सेकेन्ड दर्शकहरूको ध्यान खिच्न महत्त्वपूर्ण छ। युट्युब प्लेबुकले पावर इन्ट्रो बनाउनका लागि केही सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्दछ, जसमा निम्न समावेश छन्-
आकर्षक पहिलो फ्रेम: भिडियोको पहिलो फ्रेम आकर्षक हुनुपर्छ, या त व्यक्तित्व र सन्देश वा दृश्यहरू मार्फत।
दर्शकहरूसँग संलग्न हुनुहोस्: तपाईंले दर्शकहरूसँग सीधै कुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, र तिनीहरूलाई दर्शकको रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तिनीहरूको जिज्ञासा जगाउनुहोस्: तपाईंले दर्शकहरूलाई केही गरेर वा प्रश्न सोधेर उत्सुक बनाउन सक्नुहुन्छ।
क्लिप पूर्वावलोकन: तपाईंले भिडियोको सानो पूर्वावलोकन प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ जुन 15 सेकेन्ड भन्दा कम छ। यसरी दर्शकले के अपेक्षा गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ।
तपाईंले सुरुमा भिडियोको सामग्री-समृद्ध भागहरू प्रयोग गर्दा तपाईंका दर्शकहरूले तपाईंको सामग्री हेर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
2. क्लिकबाइट प्रयोग नगर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको भिडियोहरूमा हेर्ने समय बढाउन चाहानुहुन्छ भने क्लिक ब्याट्सले काम गर्दैन भन्ने एक ज्ञात तथ्य हो। प्रायः, तिनीहरूको विपरीत प्रभाव हुनेछ किनकि दर्शकहरूले अन्य सामग्री खोज्नेछन् यदि तपाईंले वाचा पूरा गर्नुभएन भने। जब तपाइँ भिडियोको लागि थम्बनेल र शीर्षक प्रदान गर्नुहुन्छ, तपाइँ आदर्श रूपमा दर्शकहरूलाई उनीहरूले भिडियोबाट अपेक्षा गर्ने केही प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। फ्यान्सी लोगो वा परिचयको साथ भिडियो सुरु गर्दा राम्रो लाग्न सक्छ, तर कुञ्जी छिट्टै बिन्दुमा पुग्नु हो।
3. भिडियोहरूमा अध्याय सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्
YouTube मा एक उत्कृष्ट सुविधा छ जसले तपाईंलाई अध्यायहरू बनाउन अनुमति दिन्छ। अध्यायहरू लामो भिडियोलाई भागहरूमा विभाजन गर्नका लागि मात्र उत्कृष्ट छैनन्, तर यसले दर्शकहरूलाई भिडियोमा के आउँछ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। जब तपाईं आफ्नो भिडियोमा अध्याय सुविधाहरू समावेश गर्न चाहनुहुन्छ, भिडियो खण्डहरू निर्णय गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक खण्ड वा अध्याय आदर्श रूपमा राम्रो परिचय र एक रोचक कथा हुनुपर्छ। यस अवस्थामा पहिले नै अध्यायको कुनै नराम्रो रूपरेखा सिर्जना गर्नु धेरै उपयोगी हुनेछ। तपाईंले लिन सक्ने एउटा अतिरिक्त कदम भनेको टाइमस्ट्याम्पहरूमा आधारित अध्यायहरू थप्नु हो। यसरी दर्शकहरूले लामो भिडियोको निश्चित भाग हेर्न विभिन्न टाइमस्ट्याम्पहरूमा स्विच गर्न सक्छन्।
4. ढाँचा अवरोध समावेश गर्नुहोस्
यदि तपाइँ आफ्नो हेराइ समय बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाइँका भिडियोहरू दर्शकहरूको लागि आकर्षक हुन आवश्यक छ। अवरोध गर्ने ढाँचाहरू प्रयोग गर्ने भिडियोहरू बनाउनको लागि धेरै उपयोगी रणनीति हुन सक्छ जसले दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्छ। भिडियोमा यस्तै प्रकारका भिजुअल र कथाहरू दोहोरिँदा मानिसहरू प्रायः बोर हुन्छन्। क्यामेराको कोण परिवर्तन, अन-स्क्रिन ग्राफिक्स र बी-रोल जस्ता ढाँचा अवरोध प्रविधिहरूले दर्शकहरूको ध्यान खिच्न सक्छ। एक ढाँचा अवरोध अनिवार्य रूपमा एक प्रविधि हो जसले एक विशेष व्यवहार, विचार, वा स्थिति परिवर्तन गर्दछ। यो प्रविधि व्यवहार मनोविज्ञान र न्यूरो-भाषाई प्रोग्रामिंग द्वारा समर्थित छ। जब तपाइँ ढाँचा अवरोधका तत्वहरू समावेश गर्नुहुन्छ, यसले दृश्यहरू र कथाहरू सिर्जना गर्दछ जुन निरन्तर परिवर्तन हुन्छ र दर्शकहरूलाई झुकाइ राख्छ।
5. प्रतिस्पर्धी विश्लेषण र खोजशब्द अनुसन्धान
भिडियो सामग्रीमा कुञ्जी शव्दहरूको मूल्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन, त्यसैले तपाइँको भिडियोहरू प्रकाशित गर्दा YouTube को लागि विशेष कुञ्जी शब्दहरू अनुसन्धान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँ कुञ्जी शब्द उपकरण प्रयोग गरेर कीवर्डहरू अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको सामग्रीसँग सम्बन्धित विषय टाइप गर्नुहोस् र कीवर्ड भोल्युमको आधारमा दर्शकहरूको खोज रुचि निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईंले YouTube मा स्वत: पूर्ण सुझावहरू प्रयोग गरेर कीवर्ड अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिस्पर्धी च्यानलहरूले सिर्जना गरिरहेको सामग्रीको प्रकार पत्ता लगाउन समय-समयमा प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण पनि गरिनुपर्छ। एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण भिडियो ट्यागहरू, कुञ्जी शब्दहरू, र टिप्पणीहरू बारे पत्ता लगाउन धेरै उपयोगी छ। प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषणबाट निकालिएको जानकारी लक्षित दर्शकहरूको बुझाइ विकास गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले तपाइँको भिडियो सामग्रीको साथ भर्न सक्ने सामग्री रिक्तताहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
6. तपाईंको भिडियोहरूमा कथा कथन प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँका भिडियोहरूमा दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्ने एउटा राम्रो तरिका भनेको कथा-रूप भिडियोहरू सिर्जना गर्नु हो। कथा कथन प्रयोग गर्नु दर्शकहरूको लागि उत्कृष्ट विचार हुन सक्छ जुन उनीहरूले सिक्दै मनोरञ्जन गर्न चाहन्छन्। तपाईं कथाको रूपमा आफ्नो सामग्री व्यक्त गर्न नयाँ र अद्वितीय तरिकाहरू बारे सोच्न सक्नुहुन्छ। यसले दर्शकहरूलाई चासो राख्नेछ र उनीहरूले तपाइँका भिडियोहरू हेरिरहेका छन्, प्रक्रियामा हेर्ने समय बढाउँदैछन्। जब तपाइँ भिडियो सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, एकै समयमा तपाइँलाई मनोरञ्जन र शिक्षा दिने सामग्री बनाउन सम्झनुहोस्। भिडियो जति लामो किन नहोस्, कथालाई कथाको रूपमा र अन क्यामेरा प्रस्तुतीकरण दुवै रूपमा सोच्न महत्त्वपूर्ण छ।
7. अन्य सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस्
YouTube मा हेर्ने समय बढाउने उत्कृष्ट तरिका भनेको तपाईंको ब्रान्डको उद्देश्य बुझ्ने समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्नु हो। जब तपाइँ अन्य सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ, तपाइँ नयाँ दर्शकहरू तान्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको दर्शक आधार विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको हेराइको समयमा योगदान पुर्‍याउँछ, र यसले दर्शकहरूलाई तपाईंको सहयोगीको च्यानलमा समान सामग्रीमा क्लिक गर्दा तिनीहरूको संचयी हेराइ समय बढाउन मद्दत गर्दछ। यी सहकार्यहरूलाई प्रभावकारी मार्केटिङको रूपमा होइन साझेदारीको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। जबकि प्रभावकारी मार्केटिङ भनेको सेवाको लागि नयाँ श्रोताहरू प्राप्त गर्ने बारे हो, सहकार्यहरू बढी प्रामाणिक हुन्छन् र साझा मानहरूमा आधारित हुन्छन्।
8. लामो भिडियोहरू
भिडियो हेर्ने समय पनि लम्बाइले प्रभावित हुन्छ। लामो भिडियोले थोरै दर्शकहरूले मात्र हेरेको समयको महत्त्वपूर्ण मात्रा प्राप्त गर्न सक्षम हुने भए पनि छोटो भिडियोलाई उही हेराइको समय प्राप्त गर्न दर्शकहरूको ठूलो संख्या चाहिन्छ। लामो भिडियोहरू हेर्ने समय बढाउनको लागि राम्रो छन्, तथापि, कुञ्जी यो हो कि तिनीहरू दर्शकहरूको लागि संलग्न हुनुपर्छ। यी लामो भिडियोहरू लक्षित दर्शकहरूलाई ध्यानमा राखेर सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाइँको केहि अवस्थित छोटो-फारम भिडियो सामग्री विस्तार गर्न यो उपयोगी हुनेछ। तपाईं सामग्रीमा विस्तार गर्न अद्वितीय तरिकाहरू सोच्न सक्नुहुन्छ। एकपटक लामो भिन्नताहरूको सफलता पुगेपछि, तपाईंले छोटो भिडियोहरूको रूपमा अवस्थित समान सामग्री मेटाउन सक्नुहुन्छ।
9. भिडियो श्रृंखला सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईंको हेराइको समय बढाउने अर्को उत्कृष्ट तरिका भिडियो श्रृंखला सिर्जना गर्नु हो। भिडियोहरूको शृङ्खलाद्वारा संचित हेरिएको समय ठूलो हुने सम्भावना छ। यो किनभने दर्शकहरूले सम्बन्धित भिडियोहरू हेरिरहनेछन्। यो शृङ्खला कुनै विशेष विषयवस्तु वा चुनौतीमा केन्द्रित हुन सक्छ। यो कथाको रूपमा पनि हुन सक्छ। यदि तपाइँको भिडियो शृङ्खला आकर्षक छ भने, दर्शकहरू तपाइँको सामग्रीको लागि फिर्ता आउनेछन्, जसले समयको साथ हेराइ घण्टा बढाउँछ। भिडियो शृङ्खलाको विषयवस्तु छनोट गर्दा, सबैभन्दा धेरै हेरिएका भिडियोहरू छनौट गर्न सल्लाह दिइन्छ। तपाईंले यी भिडियोहरूलाई नयाँ सामग्री सिर्जना गर्न आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
10. माइक्रो र म्याक्रो दृश्यहरू बुझ्न YouTube विश्लेषण प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंले YouTube विश्लेषण खण्डबाट आफ्नो च्यानलको बारेमा उत्कृष्ट अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो च्यानलमा म्याक्रो र माइक्रो भ्यूहरूको बारेमा नयाँ जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। YouTube एनालिटिक्सले तपाईंलाई दिन र समयमा दर्शकहरूको संख्या हेर्न अनुमति दिन्छ। यस बाहेक, भिडियोहरूमा आफैं डाटा हेर्ने विकल्प पनि छ। प्रयोगकर्ताहरूको औसत ड्रप-अफ समय निर्धारण गर्न तपाईंले विश्लेषण खण्ड प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको भविष्यका भिडियोहरूमा दर्शकहरूको संलग्नता बढाउन सक्ने तरिकाहरूको बुझाइ विकास गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंले दर्शकहरूका लागि सामग्रीलाई थप आकर्षक बनाउन सक्ने एक मात्र तरिका भनेको उनीहरूको आवश्यकताहरू बुझेर हो, जुन YouTube विश्लेषणले प्रदान गर्दछ। तपाईं दर्शकहरूको आवश्यकता अनुसार आफ्नो सामग्री दर्जी गर्न जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
11. पोस्ट गर्नको लागि सही समय निर्धारण गर्दै
यदि तपाइँ आफ्नो च्यानलको लागि हेर्ने समय बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाइँका भिडियोहरू पत्ता लगाउन योग्य हुन आवश्यक छ। यसका लागि, भिडियोहरू सही समयमा खोज सिफारिसहरूमा देखाइनुपर्छ। अनलाइन अनुसन्धानका अनुसार, YouTube मा सामग्री पोस्ट गर्नको लागि आदर्श समय मध्य दिउँसो हो। यो किनभने शिखर अवलोकन घण्टा 8 बजे मानिन्छ। यो सुनिश्चित गर्नको लागि कि तपाइँको भिडियो शिखर अवलोकन घण्टामा देखा पर्दछ, तपाइँले तिनीहरूलाई अनुक्रमणिका प्राप्त गर्न पर्याप्त समय छोड्नुपर्छ। यो सुझाव सप्ताहन्तमा राम्रोसँग काम गर्दछ, यद्यपि, यदि तपाइँ सप्ताहन्तमा भिडियोहरू अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, फरक रणनीति लागू गर्न आवश्यक छ। सप्ताहन्तमा, इन्टरनेट ट्राफिक सामान्यतया सप्ताहन्तमा बढी हुने भएकाले भिडियोहरू अलि पहिले पोस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ।
12. YouTube प्लेलिस्टहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
हेर्ने समय बढाउनको लागि, दर्शकले तपाइँका भिडियोहरू हेर्न आवश्यक पर्दैन। यदि प्रयोगकर्ताले अन्य व्यक्तिहरूको भिडियोहरू समावेश गर्ने प्लेलिस्ट हेर्नुभयो भने हेर्ने समय बढ्न सक्छ। एउटा प्लेलिस्ट सिर्जना गर्नु तपाईंको लागि धेरै लाभदायक हुन सक्छ, किनकि यसले सम्भावित दर्शकहरूलाई थप रैखिक दृश्य अनुभवको लागि मार्गदर्शन गर्दछ। यसले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताहरूको कुल हेराइ समय सत्रलाई प्रभाव पार्न अनुमति दिन्छ। प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्नका लागि, तपाइँले गर्नु पर्ने कुरा भनेको तपाइँको भिडियोहरूलाई एक अर्थपूर्ण अनुक्रममा संगठित गर्नु हो, सान्दर्भिक घटनाहरू, विषयहरू, शोहरू, र शृङ्खलाहरू सबै एकमा मिलाएर। प्लेलिस्टहरूले सुझाव गरिएका भिडियो परिणामहरूमा तपाईंको भिडियोहरू देखा पर्ने सम्भावना पनि बढाउँछ।
प्लेलिस्ट सुविधा प्रयोग गर्दा, राम्रो दृश्य अनुभवको लागि तिनीहरूलाई अनुकूलन गर्न राम्रो विचार हुनेछ। तपाईंले सुरु र अन्त्य समयको सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ताकि भिडियोको 'इन' र 'आउट' बिन्दुहरू निर्दिष्ट हुन्छन्। थप निर्बाध अनुभव सिर्जना गर्नको लागि तपाइँ तपाइँको प्लेलिस्ट मा भिडियो को intros र outros ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, एम्बेडेड प्लेयरहरू र YouTube च्यानल पृष्ठमा प्लेलिस्ट फिचर गर्न सम्झनुहोस्। तपाइँ एनोटेसनहरू मार्फत तपाइँको प्लेलिस्ट पृष्ठमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ।
13. अन्तिम स्लेट र कार्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्
त्यहाँ चालहरू छन् जुन तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ताकि मानिसहरूले धेरै छिटो क्लिक गर्नुको सट्टा तपाईंको भिडियोहरू हेर्न जारी राख्छन्। युट्युबमा कार्ड सुविधा प्रयोग गर्ने एउटा ट्रिक हो, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई भिडियो स्क्रिनमा लिङ्क थप्न अनुमति दिन्छ। कार्डको रूपमा यी भिडियो लिङ्कहरू केही अन्य भिडियो, प्लेलिस्ट, वा च्यानलमा जडान हुन्छन्। YouTube कार्ड सुविधा प्रयोग गर्दा, दर्शकहरू प्राय: बन्द हुने ठाउँमा कार्ड राख्नु राम्रो विचार हो। यसले दर्शकहरूलाई उनीहरूको हेराइ समय समाप्त गर्नुको सट्टा सम्बन्धित भिडियो हेर्न अनुमति दिनेछ। दर्शकहरूलाई अर्को सम्बन्धित भिडियोमा निर्देशित गर्नको लागि अन्त्य स्लेटहरू प्रयोग गर्नु अर्को उत्कृष्ट विकल्प हो।
14. टीजरहरू समावेश गर्नुहोस्
प्रायः, तपाइँका दर्शकहरू केहि सेकेन्ड पछि छोड्न सक्छन्, विशेष गरी यदि यो लामो भिडियो हो। तपाइँका दर्शकहरू लामो समयसम्म रहन सुनिश्चित गर्ने तरिकाहरू छन्। तपाइँ तपाइँको भिडियोको सुरुमा टिजरहरू समावेश गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाइँको भिडियोको सारलाई जोड्दछ। यी टिजरहरूले दर्शकहरूलाई उनीहरूले भिडियोबाट के आशा गर्न सक्छन् भन्ने बारे एक विचार दिनेछन्।
यदि सही रूपमा प्रयोग गरियो भने, YouTube सम्भावित दर्शकहरूसँग भावनात्मक सम्बन्ध विकास गर्नको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म हुन सक्छ। तपाईंले हेराइको समय बढाउनको लागि यी रणनीतिहरू प्रयोग गर्दा, तपाईंले थप सदस्यहरू र हेराइहरू मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछैन, तर यसले तपाईंको ब्रान्डसँग तपाईंको दर्शकहरूको आत्मीयतालाई पनि असर गर्नेछ। तपाईं पनि सक्नुहुन्छ YouTube हेर्ने घण्टा किन्नुहोस् YTpals बाट र यी रणनीतिहरू संयोजनमा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंको हेराइको समय उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न। YTpals' Buy YouTube Watch Hours सेवाको साथ, तपाईंले YouTube मा 4,000 घण्टाको हेराइ समयसम्म पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ, जसले तपाईंलाई आफ्नो च्यानल मुद्रीकरण गर्ने अवसर दिनेछ। अर्डर गरेको 24-72 घण्टा भित्र सेवा सुरु हुनेछ।
YouTube वाच समय तपाईंको कार्टमा थपिएको छ।